Nahoana No Mifananihany Amin’ny Resaka Mananasy Ny Mpiserasera Eto Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jolay 2016 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, Español, русский, नेपाली, Esperanto , English
Mananasy aho. Tao amin'i Mirana (nahazoana alalana)
Raha sary-sy-soratra no resahana, ny mananasy no laoranjy vaovao, fara-faharatsiny eto Madagasikara.
Somary manimanitra mananasy ny media sosialy eto Madagasikara tao anatin'ny andro vitsivitsy. Inona no anton'ity hafanam-po tampoka amin'ny voankazo misy tsilotsilony ity? Toy izao no tokotanin'ny toe-draharaha ara-piarahamonina eto amin'ny nosy mena amin'izao fotoana izao.
Tafiditra ao anatin'nyo firenena mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara ao amin'ny tondrom-pahantrana navoakan'ny Banky Iraisam-pirenena (sy notaterin'ny fampahalalam-baovao tahaka ny Radio France Internationale). Tsy mety loatra amin'ny ny filohan'ny Madagasikara ny toerana ara-toekarena misy ny firenena. Nihaika ny mpanara-baovao izy, dia ireo haino aman-jery sy ny olom-pirenena ao an-toerana izany “hanome porofo fa mihamahantra ny firenena.”
Malagasy mpiserasera haingana voatery amin'ny fomba manaikitra:
Voatery lasa tia manaikitra tao anatin'ny fotoana fohy ny mpiserasera Malagasy:
Koolsaina, bilaogim-piarahamonina malagasy iray, namoaka ity sary manaraka ity tao amin'ny tranonkalany:
Olompirenena Malagasy mandeha any amin'ireo fako misavovona eto Antananarivo. Via Koolsaina
Nanaraka an'io fifanakalozana henjakenjana voalohany nisy teo amin'ny filoha sy ny mpiserasera ity, dia nisy tranonkalam-piarahamonina malagasy iray hafa, Tananews, namoaka ny sarin'ny vadin'ny filoha, Voahangy Rajaonarimampianina, nitafy akanjo maitso ahitana sary mananasy eo anoloany:
Ny filohan'ny Malagasy sy ramatoa vadiny nandritra ny lanonan'ny fetin'ny fahaleovantena. Via Tananews
Nampian'ny Tananews rohy sy fanehoan-kevitra iray manaraby milaza hoe, “Tsy ny malagasy rehetra tokoa no mahantra eto Madagasikara.” Nasehon'ny rohy fa mety ho novolavolain'ny marika fampiakanjoana avo lenta Dolce & Gabana izay mivarotra azy 7.745 dôlara amerikana ao amin'ny tranonkalan'ny magazay Nieman Marcus ilay akanjo (tsy mazava raha io tokoa ny vidin'akanjo notafian'ny vadin'ny filoha).
Haingana ny fihodin'ny fahatafintohinana tato amin'ny tranonkala. Andro no nisaina dia nivoaka tamin'ny tranonkala malagasy sy ny media sosialy ireo andian-tsary-sy-soratra miaraka amin'ny tenirohy #mananasy. Indreto ny sary-sy-soratra vitsivitsy nifampizarana fatratra tamin'izany:
Kaonty iray natao ho fihomehezana naka ny anaran'ny mpanorina ny Facebook, Mark Zuckerberg, manontany momba ny mananasy eto Madagasikara. Toy izao ny fivakin'ny sary-sy-soratra, ” Hainao ve ny fiakanjo mananasy tahaka ny ataon'ny ao Antananarivo ?” Nahazoana alalana.
Tao amin'ny pejy Facebook an'i POV
“Aleo manao hetim-bolo mananasy sitrany ahay mba malaza koa.” Tao amin'i Rivo Francis tao amin'ny Facebook
“Fantatrao ve fa tena malaza tokoa ny marika Dolce & Ananas eto Madagasikara?” Midika hoe mananasy ny “Ananas” amin'ny teny frantsay. Avy amin'i Aina Rakotoson ao amin'ny Facebook
Ny mampaonena amin'izy ity dia andro vitsy monja taorian'ny voina nitranga tamin'ny fetin'ny fahaleovantenan'ny firenena no nahatongavan'izao hanihany rehetra momba ny mananasy izao. Nisy grenady nipoaka nandritra ny lanonana taorian'ny fanarahana ny matson'ny miaramila tao amin'ny kianjaben'i Mahamasina, izay nahafaty olona telo sy naharatrana olona 91. Indro ny lahatsary iray maneho ny taorian'izany toe-javatra izany:
Izao resaka “fanafintohinana nateraky ny mananasy” izao dia tonga tao anatin'ny fikarakaran'ny manampahefana malagasy bvolavolan-dalàna miompana amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny etika an-tserasera. Ny tamberina voalohany avy ao anatin'ny fomba namolavolana ny lalàna no nahafahana nieritreritra fa hamefy amin'ny fomba henjana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera izy io ary hampiditra onitra mavesatra dia mavesatra amin'izay votoaty heverina ho manala baraka. Ho apetraka ao amin'ny parlemanta tsy ho ela izy io handalo fankatoavana. [Naotin'ny tonia amin'ny teny malagasy: Ny fotoana iray tao amin'ny antenimiera tsy azo natrehin'ny besinimaro ny tolakandron'ny voalohany volana jolay no nahafahana nanapa-kevitra fa mbola tsy hiadian-kevitra sy holaniana amin'ity fotoam-pivoriana ity indray ilay volavolan-dalàna fa ahemotra amin'ny fotoana manaraka].
Nandray anjara tamin'ity tantara ity tamin'ny fanomezana rohy tamin'ireo bilaogera voatonona amin'ity lahatsoratra ity ny tonian'ny Global Voices amin'ny teny Malagasy Andriamifidisoa Zo aka Jentilisa.